प्रदेश खबर Archives - PuraKhabar
राजेन्द्र खड्गिले खोले छबिको डरलाग्दो अस्लियत, रेखाले बच्चा जन्माउन खोज्दा छबिले दश लाख मागेको खुलासा (भिडियो)
चितवनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको माइक्रो बस खोलामा खस्यो
१२ वर्षीया छोरीको आमाकै अगाडि दिनदिनै बलात्कार, आमा केही भन्दिनथिन्
July 21, 2019 Purakhabar News
५ साउन, बुटवल । सामान ढुवानीमा भिसिटिएस सिष्टम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीहरुले आज मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । रुपन्देहीका व्यवसायीक सस्थाहरुको समूह सञ्जाल रुपन्देहीले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा भेटगरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन । व्यवसायीक सस्थाहरुको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष दिपक पौडेलले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । व्यवसायीहरुको ११ बुदे ज्ञापन बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सुरक्षा कोष उद्योगिहरुको स्थायित्व र सुरक्षाका लागि तथा भिसिटिएस सिष्टम ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको भएपनि स्वयं…
लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान रुपन्देहीको अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा दीपक कार्की निर्वाचित
बुटवल । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, रुपन्देहीको सातौ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले दिपक कार्कीको अध्यक्षतमा सर्वसम्बत रुपमा नयां कार्यसमिति गठन गरेको छ । जसको प्रथम उपाध्यक्ष विजय सापकोटा, द्वितिय उपाध्यक्ष राज केसी, महिला उपाध्यक्ष रितु थापा, सचिव उज्जवल गिरी, सहसचिव विधान कार्की, कोषाध्यक्ष सञ्जय सौगात र सह कोषाध्यक्षमा रेशम खनाल निर्वा्चित हुनु भएको छ । त्यस्तै प्रतिष्ठानको सदस्यहरुमा बसन्त लम्साल, महेश खनाल, रेनु राना मगर, विक्रमबाबु विश्वकर्मा, नन्दु परियार, सुरज थापा, विष्णु श्रीपाली, रामप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र पोखरेल, निरु गुरुङ, आरती रुचाल, देवराज गैरे, अनिल…
बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न कृषि सहकारीलाई अनुदानमा १४ वटा महेन्द्रा पिकअप गाडी प्रदान गरेको छ । शनिवार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सहकारीबाट सञ्चालन भएका कृषि संकलन केन्द्र तथा कृषि हाट बजारमा तरकारी ढुवानीको लागि उक्त गाडीहरु प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले सहकारीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुलाई गाडीको चाँपी प्रदान गरिन् । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले प्रदेश ५ सरकारले कृषि सहकारी मार्फत किसानहरुको उत्पादन बजारीकरणमा विषेश जोड दिइएको बताइन् । उनले १४ वटा सहकारी…
July 18, 2019 Purakhabar News
बुटवल । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सिद्धार्थ राजमार्गमा राखेका बुद्ध मूर्तिहरू तोडफोड भएको छ । सिक्सलेन सडकको शंकरनगर चोकदेखि नयाामिलसम्म रहेका ५ वटा बुद्धमूर्तिमा तोडफोड भएको हो । तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयरका बासुदेव घिमिरेका अनुसार बुधबार साँझसम्म साविक अवस्थामा रहेका मूर्ति बिहान तोडफोड भएको हो । मूर्ति कसले किन तोडेको हो भन्नेबारे अहिलेसम्म पत्ता नलागेको पनि मेयर घिमिरेले बताउनुभयो । अहिले घटनास्थलमा प्रहरी टोलीले अध्यययन सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ। लुम्बिनीको झल्को दिन भन्दै गत आर्थिक वर्षमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गमा २२ वटा बुद्ध मुर्ति स्थापना गरेको थियो।
July 17, 2019 Purakhabar News
भैरहवा, १ साउन । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३८ गुल्म रुपन्देहीले राजश्व संकलनमा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अवैध रुपमा भारत बाट नेपाल ल्याउने समान नियन्त्रणमा लिई गरिएको राजश्व संकलन उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सशस्त्र प्रहरी बल रुपन्देहीले ३ करोड ३ लाख ४३ हजार ६ सय ३२ रुपैया राजश्व संकलन गरेको जानकारी सशस्त्र प्रहरी नायव उपरिक्षक गोविन्द बहादुर खातीले दिए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ४८ लाख १७ हजार १ सय ५५ रुपैया राजश्व संकलन भएको थियो ।…
बुटवल । प्रदेश नं ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभा सदस्यहरुको बिशेष समयमा बोल्ने कार्यसूचिबाट हटाएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशसभालाई संबोधन गर्ने समय उपलब्ध गराएका छन् । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकको सुरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिशेष समय लिएर समसामयिक बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यसूचि रहेपनि सभामुख घर्तीले एक नम्बरमा रहेको कार्यसुचिबाट हटाएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समय दिएका हुन् । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभालाई संबोधन गर्ने समय उपलब्ध गराउनुलाई अन्यथा नभए पनि बिशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बोल्ने कार्यसूचिबाट हटाउन जायज नभएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको गुनासो छ । प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित बिषयमा जवाफ दिनुपर्ने आवस्यकता रहेको…
बुटवल बजारमा भेल पस्यो, मोटरसाइकल त पुरै डुबानमा
३० असार, बुटवल । बुटवलको मुख्य बजारमा भेल पसेको छ । दिउँसो आएको पानीका कारण बुटवलको मुख्य बजारमा भेल पसेको हो । बुटवलको राजमार्ग चौराह, अमरपथ र अस्पताल लाइनमा ठूलो भेल आएको थियो ।
July 12, 2019 Purakhabar News
२७ असार, पाल्पा । जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनस्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट शुक्रबार दिउँसो नवजात शिशु गायब भएको छ । तानसेन नगरपालिका–९ सन्ढापकी २२ वर्षीया जमुना रानाको नवजात शिशु हराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णराज सापकोटाले बताए । उनका अनुसार दिउँसो करीव तीन बजेतिर शिशु हराएको हो । सुत्केरी व्याथा लागेर शुक्रबार नै मेडिकल कलेज प्रभास गएकी जमुनाले बिहान ११ बजे छोरा जन्माएकी थिइन् । सुत्केरी जमुनाको रेखदेख गर्न उनकी आमासँगै थिइन् । सुत्केरी जमुना अर्धचेत अवस्थामा रहेको अवस्थामा उनकी आमा छोरीलाई ज्वानोको झोल ल्याइदिन बच्चा काखमा राखेर मेडिकल…
बुटवल । नेपालको ताजमहलका रूपमा परिचित पाल्पाको रानीमहलको जग्गा माफिया र मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको खुलासा भएको छ । माफियाले नक्कली गुठी खडा गरी रानीमहलको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको पाइएको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनका क्रममा रानीमहलका जग्गा शंकास्पद रूपमा अतिक्रमणमा परेको तथ्य फेला परेको हो । सतर्कता केन्द्रका अनुसार १८ माघ २०६२ मा पाल्पा दरबारमा आगलागी हुँदा मालपोत तथा नापी कार्यालयका कागजात जलेर नष्ट भएका थिए । तत्पश्चात् १२ असार २०६३ मा नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न माग गर्दै खड्गभक्तेश्वर गुठीका मोही महालक्ष्मी श्रेष्ठले…
सडक मर्मत सुरु भएको ६ वर्षमा पनि बनेन सिद्धबाबा सडकखण्ड
रुपेन्देही । पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत सिद्धबाबा सडकखण्ड मृत्युमार्गको रुपमा परिचित छ । बर्षेनी दजर्नाै मान्छेहरुको हताहत हुने क्षेत्रमा सरकारको लगानी भने बालुवामा पानी हुँदै आएको छ । सडक विभागले यस क्षेत्रमा पटक–पटक गरी विभिन्न प्रविधि भित्राउने योजना बनाएपनि योजना र प्रविधि परीक्षणकै नाममा करोडौं खर्च भइसकेको छ । यो एक वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिद्धबाबा सडकखण्डको विषयमा दिनुभएको अभिव्यक्ति हो । एक वर्षभित्रै यो सडकखण्डको मर्मत र स्त्तरोन्नती गर्ने बताएपनि अहिलेसम्म काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । जब पहिरो जान्छ अनि मान्छेको ज्यान लिन्छ तब…
July 22, 2019 Purakhabar News 0
काठमाडौं – निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीच डिभोर्सको चर्चा चलिरहेको समयमा यी दुबै विरुद्ध...
ये एस्तो पो रहेछ काजोलले अजय देवगनसँग विहे गर्नुको कारण ?
एजेन्सी– बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् काजोल अग्रवाल । बेखुदीबाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी उनले कैंयौ भारतीय चलचित्रमा...
July 21, 2019 Purakhabar News 0
प्रेमीसँगको रोमान्स कारण साम्राज्ञी विवादमा ! सेलिब्रेटीको ब्यक्तिगत जीवन हुने कि नहुने ?
काठमाडौँ । अहिलेकी चर्चित अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह निजी कारणले अहिले चर्चामा रहेकी छन् । फिल्मको...
July 21, 2019 Sunil Khatri 0
काठमाडौँ — मलेसियासँगको ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला २–० ले ‘क्लिन स्विप’ गर्दा नेपाली खेलाडी केही आफ्ना कीर्तिमान...
बार्यन म्युनिखसँग हार्‍यो रियल मड्रिड
५ साउन, काठमाडौं । इन्टरनेशनल च्याम्पियन्स कपमा बार्यन म्युनिखले रियल मड्रिडलाई पराजित गरेको छ । आइतबार...
July 20, 2019 Purakhabar News 0
काठमाडौं-नेपालमा आयोजना हुने एशियन सेन्ट्रल जोन सिनियर पुरुष भलिबल प्रतियोगितालाई नेपाल सेटलाइट टेलिकमले २० लाख रुपैयाँको...
५ साउन, बुटवल । सामान ढुवानीमा भिसिटिएस सिष्टम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु अव्यवहारिक...
बुटवल । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, रुपन्देहीको सातौ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ...
बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न कृषि सहकारीलाई अनुदानमा...